Self-bafaniswe isitembu: incazelo, imiyalelo, ukubuyekezwa
isitembu Self-bafaniswe isizukulwane esisha ehhovisi Chancery ivumela umbhalo isikolo clichés imodi ibhukwana futhi enze izinga ukuphrinta ku ephepheni. Ngenxa yokusebenza kwalo ngezindlela eziningi futhi jikelele koHlelo uhlobo self-bafaniswe ka Punch wathola isebenza amahhovisi eziningi izinkampani ezahlukene ezidinga ukucutshungulwa esiningi imibhalo.
Izitembu Self-bafaniswe Nokho oluqanjwe izinkampani eziningi, kodwa enokokusonga kakhulu ezifanayo futhi imodi wokusebenza.
Ibala lesikhumba zingase zihluke.
Clichés: Inani ubumba lube lapho abalingiswa asethwe.
uhlamvu isethwe. Inani kanye nokusungulwa kuye ngokuthi umkhiqizo.
Udlawana: ithuluzi ngawo ukufakwa izinhlamvu / izinombolo kwi ujabule.
ontofontofo esikhiphekayo, okuyinto ugcwele ngoyinki.
Isici esibalulekile lapho ukhetha yokukhiqiza, njengoba uma usebenza nge ukugeleza enkulu imibhalo kuyinto bafake ngokushesha futhi izinyembezi izingxenye, isikhathi umsebenzi lolutsite incike izinga izinto asetshenziswe ekukhiqizeni.
isitembu Self-bafaniswe lungeza ngezindlela eziningi ezihlukahlukene futhi clichés, isicelo lincike ohlotsheni kwemibhalo kusetshenzwe futhi nezidingo evunywe Standard State.
ukubukeka kukanxande lwezinhlobo ezivame kakhulu clichés. Umjikelezo bunjwa kuvame kakhulu ukuba kusetshenziswe i-amadokhumenti afundwa ngaphakathi ezinhlanganweni. Ongunxantathu futhi square - Kwanyatheliswa ezikhethekile izinhlaka zikahulumeni.
Amahhovisi, noma wezinhlamvu for pad ingase ivezwe ngezindlela ezihlukahlukene futhi angathengwa ngokwehlukana noma uma indawo umonakalo ezikhona.
Umehluko khona ubukhulu ukuphrinta, kanye nenani imigqa ujabule. Izitembu enziwe izinombolo ezahlukene - imigqa emibili kusukela ngenhla, kuye ngobude ngayinye usayizi umugqa pad lilinganiselwe, inani izinhlamvu ezincane nezinkulu ebekiwe eceleni ngemodeli ngayinye.
Umbala ephrintiwe izinhlamvu izinhlamvu kuchazwe umbala inki.
Futhi kufanele kuphawulwe ukuthi ukuze ugweme mbumbulu uphawu isigxivizo kuyinto efiselekayo ukwenza kwehluke ngaphezulu ngangokunokwenzeka. Kunconywa ukusebenzisa izimpawu ukukhiqiza okuqukethwe omunye clichés amaqoqo ehlukene.
Daters - uhlobo zamanzi, ungakwazi kuphela anomthwalo ledethi, usebenzisa izinombolo kanye namagama.
Izitembu Self-bafaniswe isihambile design esingenza lula futhi ukushintsha inqubo ukunxenxa kanye nokusebenza okuvelayo.
Iphrinta izindlu siqukethe elingenhla (ikhanda) kanye Ezansi (umlenze) futhi kabani base iqinile, futhi phezu kwalo obizwa fixed ubhala ipuleti (pad). elementi okuphoqelekile ukuthi kusiza nginyathela, kuyinto entwasahlobo, isiyaphuma Ezansi kanye engenhla cindezela.
Isimo akusho uzitholele base icindezelwa ngokumelene pad inki. Ukucindezela base uzungeza futhi uwela phansi.
Pad, le ujabule lubricity inki uqondiswe kalula kungakhathaliseki imodeli, ngisho nalapho nomkhiqizi alikukhuthazi ukuthi wenze lo msebenzi ngokwakhe.
Self-bafaniswe isitembu Trodat: tesakhiwo
Troda inkampani yasungulwa ngo-Vienna (Austria) ngo-1912, indawo samanje sisekelwe Wels. Imikhiqizo ekhiqizwa ngokuvumelana ezindinganisweni eziphakeme zaseYurophu futhi itholakala ezitolo emhlabeni wonke. Umkhiqizo Izici - bafake okusezingeni eliphezulu ukumelana esetshenziswa enkulu ekwakhekeni zepulasitiki, design ukhululekile, kanye nomklamo. okunamathiselwe okuvikelekile Iyunithi yezinhlamvu wenziwa ezindaweni ezimbili. Ukuze ushaye osetshenziswayo faka ezengeziwe esikhiphekayo. Uhlamvu ukuphakama indinganiso - encane 3 mm kuya ku-4 mm ubude. Inani lemigqa kusuka 2 kuya kwezingu-8.
isitembu Self-bafaniswe inkampani Trodal itholakala izinguqulo ezimbili:
izindlu plastic has a isibambo ebalulekile ngokugcwele olubunjiwe.
Ukuze isibambo sisetshenziswa inhlanganisela metal nge plastic, bese kukhula impilo inkonzo komkhiqizo.
Izinhlobo izitembu self-bafaniswe ethulwa okunezinhlobonhlobo elikhulu:
Nge usuku. Have a imigqa ambalwa ukubhala umbhalo, futhi omunye ngqo zokumaka. Inani lemigqa kusuka 2 kuya ku-6 futhi eyodwa umugqa ukuze banikezwe usuku.
Engenazo. Inani lemigqa for isethi 2-8.
Pocket. punches yeselula ne-compact. It kalula kwenziwe ngendlela ephaketheni ngaphandle kokwesaba singcoliswe.
Ukudayiswa sihlanganisa ithikithi ehhovisi ehlukile. An isethi eyengeziwe izinhlamvu nezinombolo. It ikuvumela ukuba esikhundleni kakade kubhidlizwe izinhlamvu, kanye nokunika amandla setha ukuvikela uphawu ngokumelene mbumbulu.
Isitembu Colop: izinhlobo kanye nezici
Colop unyaka inkampani yasungulwa ngo 1980 ungowokuqala, ifektri wokuqala yasungulwa ngasemzini Wels. A anhlobonhlobo imikhiqizo, ukuthembeka kanye kalula yokusetshenziswa avumele inkampani ukuba sandise emakethe endaweni, hhayi kuphela e-Europe kodwa futhi ezwe elaliyi CIS.
Uhlamvu ukuphakama amancane 2.5 mm kunangendlela 3.5 mm. Le kit singafaka ibhokisi okubhayindiwe.
Umumo is zihlukaniswe ngamaqembu:
Izitembu self-bafaniswe. Vumela wenze iqoqo umbhalo nezinamba. Ubukhulu iphrofayela zincike imodeli. Inombolo yemigqa 2 kuya ku-10 Ukuphrinta a olubunjiwe umzimba plastic, ukuma iningi onobuhle ngesimo isikwele, ngaphandle die encane enziwa ngendlela igundane computer, - Isitembu Mouse 20Set.
Self-bafaniswe Daters. Isibalo yaseZimbabwe kusukela izingcezu 2 kuya ku-6. Leli bhokisi uyabulawa e ukuhluka ezimbili: olubunjiwe plastic, metal + plastic.
Eceleni okufakiwe ukudayiswa kanye amakilasi nge iqoqo izinhlamvu nezinombolo, isibonelo: iqoqo TS 25/35 izimpawu kuhlanganise 440 izimpawu, izimpawu 20.
Cliché iqoqo imigqa, eduze wesitimela main. Inani lezinhlamvu kanye nosayizi yabo wayezimisele model. Izidingo Eziyisisekelo ukuze ujabule ukuphrinta ukuzinza, kokungathembeki onokwethenjelwa futhi okusheshayo izinhlamvu kuphi irowu.
Classic lophawu inikeza lula futhi kalula ukuthayipha. Stroke ingenye yezingxenye izitembu. Ukuma round lwezimpawu kungase uxhumeke umkhumbi ezimbili ezihlukene.
Yenza ukufakwa izinhlamvu udinga ukuba, usebenzisa ebiyelwe iqoqo amashiya, umbhalo achazwe phezu isampula, ezokwenza lula inqubo, kusukela isethi wenziwa isithombe esibukweni.
Umbono wokuqala kungenxa ekubhaleni, ukuqinisekisa isethi efanele izinhlamvu, futhi ukuzinza okunamathiselwe.
Ukuvimbela nisebancane ukwehluleka isitembu wobulawa phezu ngokulinganayo, ngaphandle kokuthatha ihlangothi.
Izindleko kanye nokubuyekeza
Yizinhlobonhlobo, malula futsi kalula ukusetshenziswa - konke ongakusho mayelana izitembu self-bafaniswe, intengo kuncike nomkhiqizi kuka amafemu elihle emikhulu usayizi amapuleti inani lezinhlamvu, ayanda izindleko.
Futhi kubalulekile ukucabangela indaba senziwa isitembu zazo.
Ngokwesibonelo, imikhiqizo ye Trodat: isitembu self-bafaniswe metallic ngemigqa 6 zingatholakala ezisendalini for ruble 2728, ngenkathi self-bafaniswe isitembu 4 imigqa plastic, kuye ngobukhulu - ruble 494 kuya 910.
Ukubuyekeza ku Colop imikhiqizo, khuluma ngezinto ubulula nemikhiqizo high, kanye namandla futhi ashona okusheshayo.
isitembu Self-bafaniswe has a lifetime ezahlukene, kuye ngokuthi ukusetshenziswa. Uma kuprintwa umthwalo omkhulu ovela nomkhiqizi elihle ngeke isebenze ngaphandle esikhundleni izinyanga eziyisithupha noma ngaphezulu, njengoba kuqhathaniswa nozakwabo Chinese ezishibhile bahlakazeka by ngenyanga yesibili yomsebenzi. Trodat futhi Colop izinkampani abaholi ongenambangi ukukhiqizwa zokubhala, eqinisekisa izinga kanye kalula yokusetshenziswa.
Buggies yokuhlawula hhayi kuphela
Izinhlobo sleeping bag kanye nezici zabo
"Naturella" gasket. Uhlolojikelele
Ubuhlalu emthini: imithetho eyisisekelo umhlobiso isihlahla sikaKhisimusi
Diving Indwangu: incazelo daba
MRI yomgogodla lumbosacral: look at the zokugula we ngaphakathi
Kanjani ukuqala ukulungiswa efulethini entsha
Ageratum: kulinywe, zizalela nokunakekela
I igrisi kangcono ukubopha amasilinda
Foxglove ezisebenzisekayo enhle: ezikhula imbewu
Blender "Vitek" - ithuluzi esisemqoka ekhishini
Ehla Ikhaya amnandi
Inhalation ukucinana kwemigudu yokuphefumula: hhayi kuphela ukuthi lokhu kungenzeka kodwa kudingekile!